Home » အသားပေး » Phillip မမေ့ဘူးအဆိုပါချန်လှပ်ဇုန်ထဲသို့ဝင်!
ဖိလိပ္ပုကမမေ့ဘူးရဲ့ ချာနိုဘိုင်းများ၏စွန့်ပစ်ရှုခင်း၌ခုနစ်နှစ်ကရှာပုံတော်, ယူကရိန်းအစစ်အမှန်ဘဝစွန့်စားမှုရှိပါတယ် တစ်ဦးရှားလော့ဟုမျး၏ခံစား Indiana ပြည်နယ်ဂျုံးစ်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အဆိုပါသိပ္ပံ Channel ကိုစီးရီး, ချာနိုဘိုင်း'S သေစေနိုင်သောလျှို့ဝှက်ချက်: THE စွန့်ပစ်၏နက်နဲသောအရာ, premiering ကြာသပတေးနေ့, 31 ညနေ ET / PT မှာသြဂုတ်လ9တစ်ဦးဒါပေါက်ပေါက်အောင် start ကိုတွေ့မြင်ရပါမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါစီးရီးမမေ့ဘူးခေတ်သစ်နေ့ရက်ကိုသမိုင်းတွင်အဆိုးဆုံးနျူကလီးယားမတော်တဆဖြစ်မှုများ၏ site ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ဇုံမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိခြင်းရပါလိမ့်မယ်။ အကြီးဆုံးနျူကလီးယားအင်ဂျင်နီယာပျက်ကွက်နှင့် ပတ်သက်. အများအပြားပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီရှိပါတယ်။ ရိုးရှင်းသောလူ့အမှားကနေဆိုဗီယက်ကြံစည်မှုမှပင်အဖြစ်ဝေးအချိန်သံချေးထဲမှာပိတ်မိနေဒီဧရိယာ၏ထပ်မံကျစေသောကြောင့်အမေရိကန်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်အဖြစ်ဆန့်။
"ဖိလိပ္ပုမမေ့ဘူး, ချာနိုဘိုင်းမှသူနှင့်အတူသူ၏ပထမဆုံး-လက်အင်ဂျင်နီယာထိုးထွင်းသိမြင်တတ်၏သူတစ်ဦး Maverick စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးက" Kyle McCabe, သိပ္ပံ Channel ကိုအလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူကဆိုပါတယ်. "ဟုအဆိုပါဇုံသူ၏အကြောက်ကင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာတော့သူမဆိုသဲလွန်စနျူကလီးယားဘေးအန္တရာယ်သို့သစ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်လိုက်လျောမယ် unearth ဖို့ကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်များကြာပါတယ်။ "
အဆိုပါဇုန်ရုံချာနိုဘိုင်းဓါတ်ပေါင်းဖိုနှင့်နျူကလီးယားရှုပ်ထွေးထက်ပိုပါတယ်။ မမေ့ဘူး Pripyat, လူတွေအားကြီးသောတစ်တစ်ချိန်ကခေတ်မီမြို့ 50,000 များ၏စွန့်ပစ်မြို့ရှုခင်းဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ အဆိုပါမြို့အလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာ၌အသက်ရှင်ရန်နိုင်ငံ၏တောက်ပသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်အင်ဂျင်နီယာစိတ်ကိုဆွဲဆောင်။ အခုတော့ Pripyat လူသားမြုံတစ်ဦးတည်းရပ်တည်ခြင်းနှင့်သဘာဝအားဖြင့်ဖော်ထုတ်။ မမေ့ဘူးက၎င်း၏အများဆုံးစိတ်ညစ်စရာ, ရေဒီယိုသတ္တိကြွအဆောက်အ-အပါအဝင်နေဆဲအလွန်အမင်းရေဒီယိုသတ္တိကြွဓာတ်ပေါင်းဖိုတစ်ခုစွန့်ပစ်ဆေးရုံ, နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြား Duga ရေဒါများနှင့်ကန့်သတ်ဂျူပီတာစက်ရုံရှာတတ်၏။
"သင်အသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်များစေရန်သတင်းအချက်အလက်ရှိရမည်။ ဘဝက "အန္တရာယ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏ Phillip မမေ့ဘူးကပြောပါတယ်. "တိုးတက်မှုဖြစ်စေခြင်းငှါ, သင်ကအများဆုံးမျှော်လင့်မထားတဲ့အရပ်တို့ကိုအချို့ကိုရန်သင့်အားကြာလျှင်ပင်အဖြေကိုရှာဖွေရန်အန္တရာယ်များကိုအသိအမှတျပွုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ "
ချာနိုဘိုင်း'S သေစေနိုင်သောလျှို့ဝှက်ချက်: THE စွန့်ပစ်၏နက်နဲသောအရာ သိပ္ပံ Channel ကိုများအတွက် Ping Pong Productions ကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Ping Pong များအတွက်အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူကက်ဆေး Brumels ဖြစ်ပါတယ်။ Kyle McCabe သိပ္ပံ Channel ကိုများအတွက်အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။
သိပ္ပံ Channel ကိုအကြောင်း
သိပ္ပံ Channel ကို, Discovery ဆက်သွယ်ရေး multi-မီဒီယာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းယူနစ်, ထိုကဲ့သို့သောဘယျအရာသည်မြေကြီးပေါ်မှာ ?, ပုံတက္ကသိုလ်မှအလုပ်လုပ် Morgan Freeman, သိပ္ပံပညာ၏ဒေါသပြုမူသောအမှုနှင့်အတူ WORMHOLE မှတဆင့်အဖြစ်စီးရီးအပါအဝင်နာရီဝန်းကျင်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသိပ္ပံပညာ၏အိမ်တွင်ဖြစ်ပါသည်, တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့နှင့်ပုံအိုင်တီတစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်။ သိပ္ပံ Channel ကိုဖွင့်ပရိုဂရမ်းမင်းကိုလည်း DNEWS နှင့်ခြိုးဖောကျသိပ္ပံသတင်းနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိဖုံးအုပ်အချိန်မီ, ကျွမ်းကျင်သူ-မောင်းနှင်အထူးတင်ဆက်သိပ္ပံနှင့်အတူနေ့စဉ်သတင်းနောက်ဆုံးသတင်းများပါဝင်သည်။ ရရှိနိုင်သိပ္ပံ Channel ကိုရုပ်မြင်သံကြားကွန်ရက်: သိပ္ပံ Channel ကိုအပါအဝင်အားလုံးသိပ္ပံ Channel ကိုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖြတ်ပြီးစွဲငြိဖွယ်ရာ, ထိတွေ့ဆက်ဆံ, အရည်အသွေးမြင့်ဖျော်ဖြေရေးပေးသိပ္ပံ, အာကာသ, နည်းပညာ, ရှေးဟောင်းသုတေသန, နှင့်အင်ဂျင်နီယာတစ်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူသူတို့ကိုများအတွက် Premiere တီဗီ, ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်လူမှုရေးအသိုင်းအဝုိင်းဖြစ်ပါသည် US မှာထက်ပိုမို 72 သန်းအိမ်တွေမှာ; Demand ကိုပူဇျောသက်ကာတွင် complimentary ဗီဒီယို; ကြည့်ရှုသူတို့အကြိုက်ဆုံးပြပွဲအချိန်မရွေးအပြည့်အဝဖြစ်စဉ်များအပေါ်ကိုတက်ဖမ်းရန်ခွင့်ပြု SCI Go ကို app ကို; နက်ရှိုင်းသောဗီဒီယို, အပြန်အလှန်ဇာတ်လမ်းပြောပြခြင်းနှင့် virtual reality မှာ www.sciencechannel.com; နှင့် @ScienceChannel မှတဆင့် Facebook, Twitter Instagram ကိုနှင့် Snapchat အပါအဝင်သိပ္ပံ Channel ကိုရဲ့လူကြိုက်များလူမှုရေးပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်စကားစမြည်။
ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဆက်သွယ်ရေး (Nasdaq: DISCA, DISCB, DISCK) ကမ္ဘာ့ဖြစ်ပါသည် #13နိုင်ငံများနှင့်နယ်မြေများထက်ပိုနီးပါး 220 ဘီလီယံအထိတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာတဲ့ subscribers ရောက်ရှိပေးဆောင်-TV ကိုပရိုဂရမ်မာ။ ကိုယ်ပိုင်ဖက်စပ်ကွန်ယက်ကို 30 နှစ်ပေါင်း Discovery ကျေနပ်စရာသိချင်စိတ်မှဆက်ကပ်အပ်နှံထားပြီး Discovery Channel ကို, TLC, တိရိစ္ဆာန် Planet ကို, စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Discovery နှင့်သိပ္ပံကဦးဆောင်သည်၎င်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရုပ်မြင်သံကြားအမှတ်တံဆိပ်, မှတစ်ဆင့်အရည်အသွေးမြင့်အကြောင်းအရာနှင့်ကြည့်ရှု entertaining အဖြစ်အမေရိကန်: Oprah Winfrey Network မှ။ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု Eurosport, ဥရောပ, အာရှပစိဖိတ်, အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အာဖရိကဖြတ်ပြီးဦးဆောင်ဒယ်အိုး-ဒေသဆိုင်ရာအားကစားဖျော်ဖြေရေးခရီးလမ်းဆုံးကိုထိန်းချုပ်ထား။ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှုပညာရေးမှတဆင့် K-12 ဒစ်ဂျစ်တယ်ပြဌာန်းစာအုပ်တစ်ခုဆုရစီးရီးအပါအဝင်ကျောင်းများမှပညာရေးထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ, တစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်တယ်, ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဒစ်ဂျစ်တယ်ကွန်ရက်အပါအဝင်တစ်ဦးပိုမိုစုံလင်အွန်လိုင်းအစုစုနှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ်ခေါင်းဆောင်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီးwww.discoverycommunications.com.
2015 ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော JCT-VC ကို ဆူညံသံလျော့ချခြင်း တီဗီနည်းပညာ UHD / 4K / HD ကို က Ultra HD ဖိုရမ် viarte virtual reality Warsaw ကို	2017-08-17
ယခင်: Harman: အဆိုပါ Studer Dios
နောက်တစ်ခု: အလွတ်တန်းထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက် / Runner
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "Phillip မမေ့ဘူးအဆိုပါချန်လှပ်ဇုန်ထဲသို့ဝင်!" ။ http://www.broadcastbeat.com/phillip-grossman-into-the-exclusion-zone/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။